Ku biir Kooxda 'WhatsApp' ee shaqaalaysiinta iyo shaqooyinka ee UAE 🌟🌟🌟🌟🌟
Kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka Dubai 🌟🌟🌟🌟🌟
Ma waxaad ka raadineysaa Google Career Dubai dhexdeeda? 🌟
Sida loo helo Xannaano Caalami ah ee Maareynta Hoteelka UAE 🌟
Published by Shirkadda Dubai City at October 4, 2017
WhatsApp Group ee Jobs for Dubai
Whatsapp Group shaqooyinka Khaliijka, Dubai, Abu Dhabi iyo Qatar. Maalmahan badan waxay kharash gareeyaan shaqooyinka magaalada dhexdeeda UAE on WhatsApp Kooxaha Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii, qof walbaa kuma faraxsanaan doono. Ku shaqeeya Dubai ama Abu Dhabi. Aan ka fikirno in ka badan 70% dadka xirfadlayaasha ah ee u soo guuray laga soo bilaabo dibadda magaalada Dubai.
Meel kasta oo shaqo maaha waa saaxiibtinimo ujeedooyin qorista. Sidoo kale dusha sare taas hayadaha shaqaalaynta. Guud ahaan marka la hadlayo, ha bixin adeeg shaqo oo ku qanacsan. Markaa shirkadeenu wuu bilaabmayaa shaqeeya dhowr mashruuc. Ujeeddadan, waxaan bilownay abuuritaan WhatsApp kooxaha. Shirkadda Dubai City had iyo jeer waxaan rajeynayaa inaan caawiyo Ku bilow shaqo cusub Bariga Dhexe!
Sidaas darteed, haddii aad raadineyso xirfad ku taal UAE. Fadlan Ku soo biir kooxda WhatsApp ee kooxda Dubai. Waxaan nahay had iyo jeer sugto dad cusub. Sidoo kale qaar ka mid ah wakiilada shaqaaleynta gudaha UAE maalmahan. Shaqooyinka loo diro ayaa xayeysiiya barnaamijka mobilada ee WhatsApp. Marka kooxdeena WhatsApp waa oo loo abuuray dadka ajnabiga ah ee raadinaya shaqo ku sugan Dubai. Sidaa darteed ha lumin wakhtigaaga iyo faahfaahinta faahfaahintaada shaqada. Intaa waxaa dheer, u noqo shaqaale farxad cusub Dubai.
Dubai oo loogu talagalay dhammaan dadka ajnebiga ah in shaqo ka raadsato waddanka Imaaraadka Carabta Emirates.
Noqo qof xirfadle ah oo caalami ah
Hadda waxaan heysanaa codsiyo dhowr ah oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee aadka u xiisaha badan. Fadlan CV-gaaga dulsaar shirkadeena. Sidaas awgeed waxaan fursad u heleynaa inaan ku soo booqano faahfaahintaada. Waxaan raadineynaa Koonfur Afrika waxay doonayaan inay bilaabaan inay ka shaqeeyaan Dubai. Sidaas darteed dib u dhac la'aan, fadlan nagala soo xiriir kooxdayada WhatsApp ama email ahaan.
Hubi inaad isticmaasho ilaha ugu badan. Waxaa jira dad badan goobaha shaqada halkaas oo aad ku dhajin kartid resumeygaaga cusub. Isku day inaad la hadasho dadka kale iyo isku xirka iyaga. Soo ogow sida shirkadaha shaqaalaynta loo shaqaaleysiinayo iyo meesha. Dhammaan wixii xaqiiqo ah waxay kaa caawin doonaan inaad ku shaqeysid shaqooyin cusub oo ka socda UAE.
Ku biir kooxaha WhatsApp Our Links!
Xirfadda Dubai ee loogu talagalay dadka ajnebiga ah ee heerarka kala duwan
Ujeedada isbedelka xirfadeed ee caalamiga ah iyo Xirfadda Philipino dadka reer baadiyaha ah. Ku soo biir Whatsapp Kooxaha Hudheelka, Saliidda, iyo Gaaska, IT, Sales iyo Dabcan Suuqgeynta gudaha Dubai saldhigyada shaqooyinka warshadaha baabuurta iyo cusboonaysiinta. Dhinaca wanaagsan ee shaqaalaysiintayada ganacsi ilaa Waqti xaadirkan caawinaya dadka kale.
Waxaan leenahay qaar ka mid ah macaamiisha caalamiga ah, oo waxay si la yaab leh u doonayaan shaqaaleyso musharixiinta tartanka caalamiga ah. Xaqiiqdii waad badali kartaa xirfadaada waxayna awoodi kartaa ku soo biirtay WhatsApp our qorista isla markiiba.
Si loo dhigo haddii aad hadda ka shaqaynayso heerarka hoose ee heerarka sare ee ku dhowaad kasta baabuurta qaybta baabuurta ee Dubai sida wax soosaarka, HR, maamulka, R & D, xeebaha, dhulka hoostiisa, iibka & suuqgeynta, ammaanka. Waxa ugu horreeya ee aad ku xasuusato halkan waa uun, fadlan halkan ku dhageyso lambarkaaga telefoonkaaga inaad ku biirto United Arab Emirates warshadaha fursado shaqo group. Ujeedokan, isticmaal telefoonka gacanta. Waxaadna ka heshaa shaqo cajiib ah shirkaddayada shaqaalaynta. Dhanka kale, shaqo-dooneyaasha cusub way awoodaan ku biir shirkad shaqaale caalami ah. Ama xitaa nagala soo xiriir WhatsApp Dubai Group.
Xirfadda gudaha Duba way furantahay loogu talagalay gudaha 2018- 2019. Waxaa intaa dheer, waxaad bilaabi kartaa raadinta Expo Shaqooyinka 2020 ee Dubai. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waad heli kartaa siyaabo kala duwan oo lagu bilaabi karo xirfadda Dubai. Tusaale ahaan, waad awoodaa kor u qaado resumeygaaga dhowr goobo shaqo gudaha UAE. Dhinaca midig ee post this blog, waxaad ka heli kartaa xoogaa yar oo wanaagsan oo talo ah. Waxaanu ku faraxsanahay inaan kaa caawino su'aalahaaga. Waxaan nahay sugaya codsi cusub maalin kasta. Marka fadlan CV-gaaga u dir Dubai City Shirkadda.
Inaad raadineyso shaqooyinka Emirates?
In UAE waxaa jira meelo badan oo run ah halkaa waxaad heli kartaa shaqo. Tusaale ahaan dadka waayeelka ah ee shaqo doonka ah. Mar walba fiirso noqdaan shaqaale mushaar fiican leh. Dhanka kale, in shaqo laga helo Dubai sida dalxiis Marna ha noqdaan wax sahlan in la sameeyo. Sida xaqiiqda dhabta ah, shirkaddayadu waxay dadka ka caawineysaa inay helaan fursado shaqo. Hadafkayaga ugu weyn qof kasta oo shaqo doon ah waa in meel iyaga. Dabcan fursadaha shaqo mushahar fiican leh. Xaqiiqda si aad shaqo ku hesho Dubai booqasho, ka fiisada waqti ayey qaadataa. Hagaag, laga soo bilaabo waayo-aragnimada qorista hareeraha bilaha 6.
In ka United Arab Emirates, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxyaabo yaryar oo badan si ay u noqo shaqaale. Mid ka mid ah iyaga ayaa ogaaday sida loo horumariyo naftaada si aad shaqo uga hesho Dubai iyo Abu Dhabi. Suuqgeynta shakhsiga waa mid aad u muhiim ah. Gaar ahaan shaqooyinka banaan ee shaqeeya. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo wajaho shaqaaleynta. Sida loo maamulo codsigaaga shaqo. Ama xataa sida loo isticmaalo si habboon u shaqeeya. Si aad shaqo u hesho dibadda, waa inaad aqrisaa qaar Talooyin ku saabsan Dubai ka hor inta aadan u soo guurin Dubai sida shaqo raadiye.
U soo guurista Dubai
Dhinaca dhinaca wanaagsan, waa inaad aqriso tilmaan faahfaahsan oo loogu talagalay u soo guurista Dubai shaqo raadinta. Dhinaca xun, waxaad u baahan tahay inaad haysato dukumiintiyo dhowr ah oo gacanta kujira oo leh fiiso diyaarinta. Si fudud khaladka ugu xun ee suuragalka ah inuu kugu dhici karo adiga. Ma ahan helitaanka ogolaansho si aad uga shaqeyso Imaaraadka Carabta. Tusaale ahaan, UAE waxaad u baahan tahay fiiso shaqo. Isla calaamaddan oo kale, marwalba waxaa jira dad yar oo aan raacin xeerarka. Oo markay dhammeeyaan jejebinta waxaa laga mamnuucay Emirates.
Ka shaqeynta dibadda ee Dubai iyo Waxbarashada
Haa, ka shaqeynta Dubai waa qiimahaas? Jawaabtu waa Haa !. In Emirates 7 waxaan had iyo jeer nahay meelo wanaagsan si loo horumariyo xirfado gaar ah. Tusaale ahaan, waxaad maareyn kartaa Xirfadlaha & Jaamacadda ee Bariga Dhexe. Tusaale ahaan, Ku noolaanshaha hoolka gobolka Gulf had iyo jeer caawinaad. Ma aha in la sheego in haddii dhowr sano aad si dhab ah u horumarin karto dhowr ah fursado fiican. Laakiin si aad u hesho inaad u baahan tahay waxbarasho wanaagsan. Mid ka mid ah gacmaha wax ku ool ah ayaa noqon kara qalabyada tacliinta iyo Ph.D.
Waxbarashada Dubai waa mid aad u muhiim ah. Ma jiro hab sidaas oo kale ah helitaanka maareynta maareynta ee UAE gaar ahaan MBA iyada oo xirfadahaani ay tahay inay ahaato mid sahlan. Sidaas awgeed baadhitaan loogu talagalay shaqada gaar ahaan shaqada iyo horumarka marwalba waxay la yimaadaan dugsiyada wanaagsan. Dabcan, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah xirfadaha asaasiga ee aasaasiga ah si aad u bilowdo. Laakiin kuma filna ku nool magaalada Dubai heer wanaagsan. Dabcan, qaabka ugu wanaagsan waa in aad dhammeysid waxbarashadaada waddankaaga.
Ka dibna u guurista Dubai, tusaale ahaan, barida shaqooyinka bannaan. Way fiican yihiin maaree nolosha Carabi. Waxaa intaa dheer, xittaa ku raaxeeyaa dhaqanka waxbarashada sare ee Emirate Fadlan ogow wax yar wax badan oo ku saabsan hab nololeedka UAE. Iyo sida ay Dubai u shaqeyso, sidoo kale waxa aad sameyn karto Dubai.
Soo qorida magaalada Dubai ee WhatsApp
Helitaanka wanaag qoraaga Dubai. Ma aha heshiis fudud in la sameeyo. Gaar ahaan wakaaladaha shaqaaleynta ee qiimeynta sare leh. Waxaa jira qaabab dhowr ah si ay u gaaraan dadka qora ee Linkedin. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa wakaaladaha shaqaalaynta ee tooska ah. Inkasta oo tani ay run tahay weli waa habka ugu wanaagsani waa habka caadiga ah. Si fudud u-wareejinta CV-ga qorayaasha. U wacista Wakiillada HR ee Dubai. Weydiiso saaxiibo inay kaa caawiyaan. Waxay ogaan karaan dadka qaarkood. Laakiin sida ugu fiican ee shirkaddayadu had iyo jeer kuula talinayaan dadka shaqo doonka ah. Waa in la raaco nidaamka caadiga ah Isticmaal liiska hay'adaha qorista ee Dubai. Soo dirista iyo faahfaahinta faahfaahinta bogga internetka si aad kubbada u ordid. Muddada dheer, waa in ay si fiican u shaqeeyaan.
Waxaan had iyo jeer kugula talineynaa shaqsiyaadka waayeelka ah, adeegso internetka si caqligal ah. Qalabkani waa mid cajiib ah oo mudan qiimahaaga qaaliga ah. Si aad u dhigto hab kale, waad awoodi kartaa booqo dekadaha shaqada ee Dubai ama xitaa aad u heshid talooyin qaan-gaar ah Heshiiskaan, weli, bogga shabakadda bulshada ee ugu fiican ee xirfad shaqo waa LinkedIn. Halkaas ayaad ka heli kartaa si toos ah ula xidhiidh shaqaalaha qorayaasha. Shabakadda Linkedin waxay noqonaysaa isbeddel sii kordhaya ee Aasiya iyo Bariga Dhexe. Sidaas awgeed waxaad dhab ahaantii u baahan tahay inaad abuurto astaanta macquulka ah.
Shaqo raadinta aagga magaalada Dubai
Hubi inaad ogaan doonto sida loo Maamulayaasha qorista shaqaalaysiinta dareenka. Intaa waxaa dheer, ma aha oo kaliya maamulaha bulshada ayaa kaa caawin doona inaad u shaqeysid shaqo. Oo booqo dhowr boggaga xirfadda ee talo-bixinta ee xirfad ku leh Dubai. Marna ma ogaan kartid xaqiiqda aad ka heshid warqadda shaqadaada oo ay timaado albaabbadaada. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa kooxda WhatsApp ee shaqo raadintaada.
Ha iloobin inaad faahfaahin ka hesho Macluumaadka ku saabsan degaanka Dubai. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato qaar ka mid ah iyaga haddii aad raadineyso inaad noqoto dalxiis. Dubai City waa meesha ugu fiican ee loogu talagalay dadka ajnebiga ah. Hadda waxaa jira fursado fara badan haddii aad tahay haween uur leh.
Siyaabo cusub oo lagu helo xirfado waddamada GCC
Tallo kale oo fiican iyo mid caqli-gal ah ayaa ah in lagu xiro internetka. Guud ahaan waxaa la hadlaya shaqaaleynta shirkadaha iyo wakaaladaha shaqaalaynta ee Hindiya ee Mumbai. Ganacsiga wadamada GCC ee Booming. Dhinaca wanaagsan, adeegayaga, waxaad fursad u leedahay inaad hesho shaqooyinka WhatsApp ee Bariga Dhexe. Sidaas darteed waa runtii u qalantaa in la qaato daqiiqado yar iyo la xiriiraan dadka kale. Shirkadeena si dhaqso ah ayey noqotaa abuuraha ugu dhaqsaha badan ee kooxaha qorista ee Emirates.
Inta badan shaqaalaheena shaqo-doonka ah iyo adeeg-bixiye cusub ayaa jecel mid kasta oo ka mid ah WhatsApp Group ee aan abuurno maalin kasta. Wax badan ayaa jira waxtarkooda marka ay soo booqdaan adoo adeegsanaya HowsApp Groups si aad u hesho shaqo bannaan oo Dubai. Waxaan jecelnahay oo had iyo jeer si diirran ugu soo dhaweeyaa dadka cusub ee taleefannada gacanta.
Habka ugu adag ee loo helo shaqo cusub oo Dubai ah. Si aad u codsato websaydhyada tooska ah. Sababtan awgeed, shirkadeenu waxay abuurtay shirkadaha ugu sareysa inay ka shaqeeyaan Dubai. Waxaad arki kartaa qofka shaqaaleysiinaya Dubai. Oo waa kuwee kan? ugu fiican suuqa? Sababtoo ah haddii aad jeceshahay inaad ka shaqeyso Bariga Dhexe. Waa inaad bilowdid inaad wax yar ka qaadatid istaraatiijiyada PR ee aad ku shaqaaleysid.
Maxay u qalantaa inay bilowdo inay ka shaqeyso GCC?
Tusaale ahaan, hab fiican oo loo helo xirfad gaar ah oo si fiican loo yaqaan. Iyo waa maxay Warshadaha ugu caansan?. Dabcan, 7 waxay bilaabaan Dubai Hotel. Sidaa darteed, waxay noqon doontaa mid caqli gal ah bilaabaan ka shaqeynta warshadaha hotel ee Dubai. Marti gelinta Carabiga ayaa si wanaagsan looga yaqaanaa wadamada GCC. Marka, mustaqbalka fog, waa inaad bilowdaa inaad ka fikirto mihnadda noocaan ah. Maxaa Dubai waa wax la yaab leh ?. Iyo mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu meeleeyay GCC ?. Sababtoo ah waa mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon dunida oo ay kujirto heerka dambiyeedka '0%'. Marka sida aan kugula talinay nooca shaqooyinka. La soco sida aad u awoodid noqo darawal Uber ee Dubai. Sidoo kale, iska hubi kuwa kale kooxda WhatsApp ee kooxda. Way ku caawin karaan si loo helo fursado shaqo oo badan oo ku yaal Dubai.
Mid ka mid ah dalabka ugu wanaagsan ee Bariga Dhexe waa suuq geyn?
Dhinaca kale, waxaad u guurtay UAE. Guud ahaan si aad u hesho shaqo fiican. Ugu fiican Xirfadda Bariga Dhexe waxaad ka heli kartaa Suuq-geynta. Waxaa jira 50,000 cusub ee WhatsApp ee ku saabsan mawduucan. Sidaas awgeed way fiicnaan doontaa inaad ogaato waxoogaa yar. Si aad dib ugu hesho fursada ugu fiican ee xirfadeed. Waxaan nahay Xayiraadda suuqa shaqada. Nooca shaqaaleynta ayaa la xusay. Miyuu dooranayaa caanka ah dadka ka soo jeeda dadka reer Asiya gaar ahaan dadka doonaya in ay u guuraan Dubai. Yaa marna ka jawaabin taleefan dhalinyaro ah oo ka yimid Hindiya? Yaa isku dayaya inay iibiyaan alaabta la soo saaray ee telefoonka? Haa, tani waa waa qayb ka mid ah suuq-geynta sidoo kale Bollywoodka.
Isweydaarsiga ganacsiga GCC wuxuu sidoo kale kobcayaa xarumaha wicitaanka. Taasi waa mid ka mid ah qaababka ugu fudud ee loo maro shaqo hel. Gaar ahaan haddii aad tahay laga bilaabo Hindiya oo raadinaysa fursado shaqo oo ku yaala UAE. Tani waa hab. Waxaad kaloo ka heli kartaa dad kale oo ku caawin kara. Tusaale ahaan, waxaa jira waxyaabo badan oo wanaagsan fursadaha Bariga Dhexe. Inaadan xitaa ogeyn. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa uun dadka kale.
Sidee loo doortaa Shirkadda wanaagsan ee Dubai si ay u shaqeyso?
Halkan iyo meesha aad ka akhrisan karto. Laakiin sida kaliya ee ay tahay ogow haddii shirkadu mudan tahay waqtigaaga. Guud ahaan, waa in la bilaabo shaqada gudaha. Habka ugu fiican ee loo sameeyo waa inuu tago a 1-maalin socodka wareysiga Dubai. Sanadihii soo socda google isbeddelada. Waxay muujisay in wareysiga noocan ahi uu sii kordhayo maalin kasta. Tusaale ahaan, annaga shirkad qorista shaqooyinka ee 2018, waxaan had iyo jeer sugaynaa musharaxi cusub. Sida ugu fiican ee loo helo Top 15 shirkadaha ugu fiican ee ka shaqeeya UAE. Ka dib, waxaad lahaan doontaa aqoon sifo leh oo ku shaqaalaysiin kara. Intaa waxaa dheer mushaharka aad xitaa filan karto.
Shirkadaha waaweyn waa inaad isku daydaa inaad gasho. Ma jiraan shirkado kor u kaca oo ka ifaya magaalada Dubai. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa internetka. The caawimo sharci ah ee raadinta shaqo waxaad ka heli kartaa shirkadda Dubai City. Shirkadda Dubai City mar kasta caawinta shaqo doonka si loo helo shaqo. Waxaan mar walba isku dayeynaa inaan dhiirrigelino qof kasta oo shaqo doon ah. Waxaanu awood u leenahay in aan dib u eegno shaqaaleyno raadinta Dubai. Waxaa intaa dheer ka dibna a qoraalka warbaahinta bulshada iyo kooxda WhatsApp ee kooxda. Waxaan qoraynaa Waa maxay sababta ay u qalanto in ay bilawdo fursado shaqo ee Dubai. Macluumaad intaas ka badan oo suurtagal ah ayaa suurtagal ah in ay ku caawiyaan. U guurista meelaha Bariga Dhexe.
Sida loo helo iyo loo dalbado boosaska bannaan ee Imaaraadka
Jumladaha soo socda ee dhowrka ah waxaan jeclaan lahayn inaan ku daboolno adiga. Iyo su'aasha ugu weyn ee ku saabsan sida loo bilaabi karo mustaqbal dibadda ah ee magaalada Dubai Iyadoo ganacsi sii kordhaya, shirkad weyn oo caalami ah iyo xitaa shirkadaha maxaliga ah ee Imaaraadka. Waxaa ka mid ah xarumaha maaliyadeed ee ugu wanaagsan. Iyada oo ay la socoto sanadaha soo socda Xukuumada UAE. Ku bilaw maareynta qorshooyinka kor u qaadida heerarka. Iyo shaqaale cusub oo caalami ah oo caalami ah. Gaar ahaan Shaqaalaha Pakistan kuwaas oo doonaya in ay u guuraan Dubai. Hadda si dhakhso ah u maamuli kartaa fiiso. Dhanka kale, waxaad u baahan tahay inaad sare u qaaddo heerarkaaga.
Waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso resumeygaaga heer ganacsi. Hayso nuqullo faahfaahsan oo ku saabsan u qalmidda Imaatinka Imaatiga si aad u bixiso Haddii aad qabto horeba waa wax laga cabsado. Hubi in shahaadooyinkaaga shakhsiyadeed ee dalkaaga hooyo lagu tarjumay. Xitaa dukumiintiyada kale ee lagama maarmaanka ah ayaa lagu xalliyaa boostada ama email Weligana diyaar u ahaadaa inaad dirto si loogu qoro Dubai iyo Abu Dhabi. Inkasta oo laga yaabo inay cadahay, laakiin maareeyayaasha shaqaalaynta. Gaar ahaan kuwaa kuwa oo leh waayo-aragnimo maareyn sare.
Si shaqsi ahaan ah ayuu u arkay, waxbadan oo badan oo noloshooda ah. Sidaas ha sugin ilaa daqiiqada ugu dambeysa. Sababtoo ah Dubai majirto marnaba seexan oo kor u qaadida heerarka. Ka hor intaadan dib u dirin mar kale marwalba dib u noqo, isbeddel ama ka saar waxyaabaha aan loo baahnayn. Oo ku dar faahfaahin khibrad dheeraada ah oo cusub iyo taariikhda cusub ee la cusbooneysiiyey xitaa Linkedin waa sax. Waa runtii u qalantaa in la ogaado. Sida shirkaddayadu u awooddo waxay kaa caawinayaan inaad gaarto shaqo raadintaada.
Ka raadso Job ee WhatsApp shirkadda Dubai City
Si aad u sheegto shaqaale shisheeye ah oo shaqo raadis ah waxaa lagu dari doonaa waxa What App.
Duulimaadyada Magaalada Dubai ee 2018-2019
RESUME UPLOAD U DUBAI!
Waxaan nahay oo shaqaaleysiinaya qurba-joogta cusub ee Dubai
WhatsApp qorista ee magaalada City
Waan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno. Si fudud sababtoo ah waxaan raadineynaa dalxiisayaal cusub oo doonaya inay ku biiraan kooxdeena. Xaaladahaas oo kale, waxaan abuuray a nidaamka qorista taleefanka gacanta ee dadka shaqo doonka ah. Sidaas darteed haddii aad jeceshahay WhatsApp qorista. Hadda waxaad faafin kartaa faahfaahintaada shaqaaleysiinta shaqaalaheena gacanta ee Dubai.
Waxa ugu horeeya ee la xusuusto? ka hor intaadan tegin. fadlan ka tag faallo hoosta. Faahfaahintaada, sidaas darteed waxaan awoodi doonaa inaan si toos ah ula xariirno. Waxaan sidoo kale nahay shaqaaleynta shirkadaha Sacuudi Carabiya. Sidaas awgeed waa qiimihiisu yahay in lagu soo cusbooneysiiyo CV anaga. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayada HR waxay isku dayi doonaan inay la wadaagaan faahfaahintaada.
Maxaad ka fekereysaa WhatsApp Online Recruitment? Kuwa ugu fiican waxay ku jiraan kaliya Imaaraadka Carabta. Waxaan sidoo kale hadda nahay ka caawinta dumarka qurbojooga inay shaqo helaan Dubai.
Shirkadda Dubai City waxay bixisaa adeegyo shaqaaleyn guud ah oo ku saabsan Whatsapp. Dhinaca kale, waxaan sugeynaa farriimaha aad adiga. Yaa ogaan kara waxaan kaa caawin karnaa sidii aad u noqon lahayd dalxiis cusub oo ku yaal Dubai ama Qatar. Ugu dambeyntiina, bilaabi inaad ka shaqeyso Emirates.
Ka caawi dadka kale inay xirfad ku qaataan Dubai
Falanqaynta ugu dambaysa fadlan share maqaalkeena Google fursado shaqo. Waxaan halkan joognaa si ay uga caawiyaan dadka kale inay gaaraan bartilmaameedyada xirfadaha ee Linkedin. Markasta waan ku faraxsanahay markaan soo booqdayaasha cusub. In aan gacanta ku dhiibo oo aynu ku wadaagno boggeena Facebook ama Linkedin. Marka la eego qodobbada, waxaad caawinaysaa dadka kale. Iyo habka ugu fiican ayaa ah in lagugu xiro dadka qora on LinkedIn.
Mar walba waxaa jira fursada fursado shaqo magaalada Dubai. Oo marnaba ma ogaan karno xitaa xitaa fursadaha shaqo ee bangiyada waayo, adigaa iska leh. Sidaas awgeed, fadlan naga caawi inta aad awooddo oo aad wadaagto maqaalkayaga. Sababtoo ah in dadka kale caawiyaan way u fiican yihiin qof kasta. Yaa ogaan kara mustaqbalka qof inuu ku caawiyo. Waxa kale oo aad ku heli doontaa riyooyin mihnadeed oo ku yaal Emirates.
Ma rabtaa inaad bilowdo Ka shaqeynta Emirates sida Expat Ha iloobin ku darista lambarka taleefanka gacanta ee WhatsApp nooca? Resume Resume ku socota kooxda ugu dhaqsaha badan ee kobcaya ee Bariga Dhexe !.
Maxaa dukumiinti ah Kuwait? Visa Kuweyt Dukumintiga u oggolaanaya muwaadiniinta reer Poland inay u guuraan dhulka Kuwait waa fiiso, oo laga heli karo Safaaradda Kuwait ee Warsaw. Qaab kale oo lagu helo dukumiinti (muddo aan ka badnayn bilo 3) waa in lagu gato garoonka diyaaradaha ee Kuwayt, iyada oo aan la helin qaab rasmi ah. Kuwa haysta fiisaha dalxiiska ee Kuweyt waxay noqon karaan kuwa haysta baasaboor shaqeynaya ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda bixitaanka. Ujrada fiisaha ayaa ah 3 KWD, qiimaha kaas oo isbeddelaya qiyaastii 35-40 PLN. Kuwait lacag intee la'eg ayay qaadanaysaa? KWD Kuwaiti Dinar! Muuqaalka ku yaal xeebta Kuwaiti ee xeebta, oo u dhalaalaysa qorrax dhaca, oo ku xeeran biyaha gacanka Faaris, oo lagu qurxiyey doonyo iyo maraakiibta ku soo laabanaya dekeda, ayaa runtii lagu xasuusan doonaa muddo dheer kuwa iyagu yeelan doona Fursad ay indhahooda ugu fiiriyaan aragtidan. Intaa waxaa sii dheer, safar Kuweyt waa fursad weyn oo lagu arko Xarunta Sayniska, oo ah aquarium-ka ugu weyn ee ku yaal Bariga Dhexe oo dhan, kaasoo ay ku urursan yihiin noocyada xayawaannada badda ku nool Gacanka Carbeed, oo ay ka mid yihiin sharkooyinka. Si aad indhahaaga oo dhan ugu aragtid soojiidashooyinkaan, kahor intaadan bixin, waa inaad xasuusataa jawaabta su'aasha "Lacagdee Kuwait?" - Lacagta Kuwaiti waxay siin doontaa socotada safar amni iyo nabadgelyo leh.